चुनिख�िई सके पछि हामीले एउटा दल भन्दा पनि उठेर समग्र चुनिखेल बासीको हितका लागि लाग्नु पर्छ भनेर � | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २५ गते ०१:१४ मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको नेकपा एमाले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर १३ का वडा अध्यक्ष उम्मेदवार श्रीकृष्ण श्रेष्ठसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
वडा बासीहरुको घर–दैलोमा पुगिरहनु भएको होला, कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनु भएको छ ?
यो चुनिखेलमा हामी भनेको एमाले, एमाले भनेको नी हामी हो । यो स्थानमा समग्र चुनिखेलको विकासका लागि एमालेले उम्मेदवारको रुपमा मलाई छानेको छ । चुनिखेलको विकास र सामाजिक कामका लागि एमालेको मान्छे बाहेक अरु कोही पनि छैन । हामीबाट मात्र चुनिखेलको विकास हुन्छ भन्नेमा मतदाता दाजु–भाई तथा दिदि–बहिनीहरुलाई विश्वास छ ।
अरु पार्टीका उम्मेदवार पनि म जित्छु भनेर लागिरहेका छन्, यो मानेमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ कस्तो उम्मेदवार ?
उहाँहरुलाई अहिले मात्र चुनाब लागेको, हामी चुनाबका लागि भनेर कहिले पनि लागेनौ । हामीले समाजको विकास र सामाजिक काम गर्नु पर्छ । हामी एउटा मानव भएर जन्म लिई सके पछि हामीले एउटा दल भन्दा पनि उठेर समग्र चुनिखेल बासीको हितका लागि लाग्नु पर्छ भनेर हिड्ने मान्छे । कोही कसैलाई चोट लाग्छ भने मलाई पनि पक्कै लाग्छ । हामी त्यस्तो पार्टीको मान्छे । मलाई चुनिखेल बासीहरुले तपाईको लागि हामी लाग्छौ । तपाई हाम्रो चुनिखेलका लागि आवश्यक छ । भन्ने कुराहरु उहाँहरुले गर्नु भएको छ । त्यसैले म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ ।
हिजोका दिनहरुमा चुनिखेल बासीहरुले श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट के पाए ?
मैले आफुलाई कहिले पनि चेन्ज गरिन । हाल उम्मेदवार भएर पनि ममा चेन्ज भएको छैन । म हिजो जस्तो थिए , आज अझ जिम्वेबारी थपिएको महशुस गरिरहेको छु । भोलीका दिनहरुमा अझ धेरै कामहरु गर्नु पर्ने छ । मलाई विश्वास गर्नु भएको छ र त्यही विश्वासलाई कदर गर्दै अगाडी बढ्छु ।
मलाई लाग्छ हामी अलिकति ढिला जन्मिएका रहेछौँ । अलिकति अगाडी जन्मिएको भए यो चुनिखेल धेरै विकास हुने थियो । चुनिखेल बजारबाट २, ३ किलोमिटर मात्र टाढा भएको ठाउँ । यसमा जति विकास हुनु पर्ने हो, त्यति विकास हुन सकेको छैन । अग्रजहरुले राम्रो गर्न खोज्नु भएको थियो होला तर मेहनत कम गरेको जस्तो लाग्छ ।
हामीले काम गर्न थाले देखि धेरै विकास गर्न सफल भएका छौँ ।
नेकपा एमाले बुनपा १३ का अध्यक्ष उम्मेदवार श्रीकृष्ण श्रेष्ठसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः